तपाइँको फेसबुक पृष्ठ कसरी सुधार गर्ने Martech Zone
मंगलवार, जुलाई 30, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
शर्टस्याक एक प्रयोग गरेको छ सञ्चालन मानसिकता - के काम गर्दैन हटाउने र के टुटिएको छ फिक्सिंग - एक उपयोगी इन्फोग्राफिक रूपमा तपाईंको फेसबुक पेज एक चेकअप दिनको लागि। यहाँ अपरेट गर्न र तपाईंको फेसबुक पृष्ठ उपस्थिति सुधारको लागि सुझावहरूको सूची छ।
दृश्यता वृद्धि गर्न, तपाईंको कभर फोटोका लागि फोटो वर्णन लेख्नुहोस् जुन CTA समावेश गर्दछ (यो गर्नका लागि, केवल फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रदान गरिएको खाली ठाउँमा लेख्नुहोस्)।
विज्ञापन लक्ष्यीकरणका लागि प्रयोगकर्ता डेटा ट्र्याक गर्न, तपाईको इनसाइट्स प्यानलबाट साप्ताहिक वा मासिक "डेटा निर्यात गर्नुहोस्"। तपाईंको पृष्ठको प्रगति ट्र्याक गर्नको लागि रिपोर्ट प्रयोग गर्नुहोस् र पोष्टहरू निरीक्षण गर्नुहोस् जुन सब भन्दा बढि स .्लग्नता हुन्छ।
स्थिति अपडेट पोष्टहरू तपाइँको ब्रान्डसँग बोल्नु पर्छ। 70/20/10 नियम पालना गर्नुहोस्। सत्तर प्रतिशत पोष्टहरूले ब्रान्ड मान्यता निर्माण गर्नुपर्दछ; २० प्रतिशत अन्य व्यक्ति / ब्रान्डबाट सामग्री हुन्; १० प्रतिशत प्रोमोशनल हो।
तपाईंको पृष्ठ को शैली परिभाषित गर्नुहोस् र एक सामाजिक मिडिया शैली गाइड सिर्जना गर्नुहोस् त्यसैले प्रशासकहरु लाई के पोष्ट गर्न थाहा छ - र के नगर्ने। निर्णय गर्नुहोस् कि पृष्ठको टोन रमाईलो, हास्यास्पद, जानकारीमूलक, पत्रकारिता, आदि छ र लगातार छ।
यदि तपाईं तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू सजिलै मोबाइल उपकरणहरूमा पहुँच योग्य छन्। भण्डार संकेतहरूमा QR कोडहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको फेसबुक पृष्ठ वा अनुकूलन अनुप्रयोगमा ग्राहकहरूको नेतृत्व गर्न।
जब स्थिति अपडेटहरूको टिप्पणीहरूको सेक्सनमा प्रयोगकर्ताहरूलाई जवाफ दिनुहोस्, नकारात्मक प्रतिक्रिया देखिने छोड्नुहोस् ताकि ग्राहकहरू र सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईं यसको प्रतिक्रिया कसरी देख्न सक्दछन्।
तपाईंको टाइमलाइनमा तपाईंको तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग थम्बनेलहरू चित्रित गर्नुहोस् र प्रत्येक अनुप्रयोग थम्बनेलमा कार्य गर्न कल समावेश गर्नुहोस्।
प्रोफाइल फोटो कभर फोटो पूरक हुनु पर्छ। तपाइँको प्रोफाइल फोटो प्राय: परिवर्तन गर्नुहोस् मौसम प्रतिबिम्बित गर्न, छुट्टी छुट्टी, आदि।
सटीक रूचि भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न फेसबुक विज्ञापनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। प्रायोजित कथाहरू र प्रचारित पोष्टहरू उत्कृष्ट विज्ञापन विकल्पहरू हुन् तपाईंको पोष्टहरूको भाइरल सम्भावना बढाउन मद्दत गर्न।
तपाईको पृष्ठको बारेमा सेक्सनमा, यदि सम्भव भएमा तपाईंको कम्पनीको URL सूची गर्नुहोस्; तपाईंको अन्य साइटहरूमा URL हरू सहित पूर्ण रूपमा सेक्शनको बाँकी भाग भर्नुहोस्। यो सेक्सन प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको ब्यापारको बारेमा जानकारी पनि समावेश गर्न, जस्तै तपाईंलाई स्थापना गरिएको मिति, सम्पर्क जानकारी र तपाईं पुग्नु भएको माईलस्टोनहरू।
जुलाई,, २०१ at 31::2013। बिहान
त्यसोभए मैले फेला पारे कि उनीहरूसँग पाठको साथ फोटोहरू साझा गर्नु भनेको केवल एक सादा तस्वीर भन्दा थोरै राम्रो गर्छ। तपाईं यसको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ? साथै तपाईंले फेसबूकमा भिडियोहरू साझेदारी गर्दा के अनुभव गर्नुभयो? के तपाइँ उनीहरूलाई मद्दत गर्ने लाग्छ? मलाई ती प्रयोग गर्न मनपर्‍यो।
हाम्रो इन्फोग्राफिक डगलस साझा गर्न को लागी धन्यवाद!
अगस्ट 1, 2013 मा 9: 54 AM
राम्रो लेख, तपाइँ यहाँ केहि उपयोगी सल्लाहहरु पोस्ट गर्नुभयो। र तपाइँ प्रशंसकहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिने बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के कुनै प्रश्न वा टिप्पणीको लागि समयमै प्रतिक्रिया दिन महत्त्वपूर्ण छ? यसले कसरी फेसबुक पृष्ठहरूलाई असर गर्दछ?
अगस्ट,, २०१62013:२१ अपराह्न
यो सबै आशाहरु मा निर्भर छ। म विश्वास गर्दछु कि धेरै जसो उपभोक्ताहरूले प्रश्न सोध्छन् र तत्काल उत्तरहरूको आशा गर्छन्। केहि… हामी जस्तो सक्रिय स्टाफ पर्खाइविना तिनीहरू मध्ये ... लामो समय लाग्छ। 🙂